Cadastre - Bogga 9 - Geofumadas
Kheyraadka iyo codsiyada diiwaangelinta maamulka kuwaas oo ay ku qoran yihiin rukumada, magaalooyinka iyo guryaha gaarka ah.
Ducada Sweet ee Cadastare
Tani waa mawduuca DVD ee Diego Erba uu i siiyay wareysi aan la yeeshay waqti ka hor intii uu booqanayay Honduras. Cinwaanka xoogaa mugdi ah kuma jiro, si kastaba ha noqotee waxa ku jira waa dhadhan fiican in la dhageysto, iyo in la arko maaddaama ay yihiin fiidiyoowyo aad u wanaagsan. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah: Territorial Cadastre; ...
cadastre, Maamulka Land
Sidee sax ah waa sawirada Google Earth
Arrinta saxda ah ee dayax gacmeedka iyo sawirrada saxda ah ee Google Earth waa su'aal diiwaanka mashiinnada raadinta, maalmahan marka saxnaanta jahwareerka leh dulqaadku ay u fududaan tahay sida GPS ee taksi u luminta, way fiicnaan laheyd in lagu sameeyo dhowr falanqeyn ku habboonaanta ama aan loo isticmaalin kuwan ...
cadastre, Google Earth / Maps
NAD 27 ama WGS84 ???
In kasta oo muddo ka hor Machadyada Juqraafiga ee Latin America ay ku sameeyeen is-beddelka sarkaalka wGS84 sidii odoros caadi ah, isbeddelka heerka isticmaalka xoogaa waa gaabis yahay. Xaqiiqdii saadaashu had iyo jeer waa mid isbeddel ah oo isbeddelku si dhib yar uma muujinayo isbeddelka Datum ee u dhexeeya NAD27 iyo NAD83, hase yeeshe saameyntu waa ...
Argentina, waxay isticmaali doonaan Google Earth si looga hortago canshuur celinta
Sida laga soo xigtay war lagu daabacay wakaalada wararka ee AFP, maamulka canshuuraha ee gobolka Buenos Aires ayaa isticmaali doona Google Earth, si ay u raadsadaan dhismayaal aan la shaacin oo ka hor qasnadda. Kuweena mar uun masuulka ka ahaa waaxda Cadastre ee degmo, waxaan ka warqabnaa in dadku aysan haysan ...
Google Earth ee isticmaalka Cadastare?
Marka loo eego faallooyinka qaar ee baloogyada qaar, waxay u muuqataa baaxadda Google Earth inay ka gudbi doonto ujeeddooyinka dejinta webka ee bilowga ah; taasi waa kiiska codsiyada lagu jihaynayo aagga cadastre. Diario Hoy, oo ka socota magaalada Mar de Plata ayaa daabacda dacwad, taas oo ...
ArcGIS-ESRI, cadastre, Google Earth / Maps
Heerarka Maareynta Kastamka Dawladda
Maareynta Territorial waa karti maxalli ah, sharciyada Dowladaha Hoose ayaa guud ahaan masuuliyadan u siinaya dawladaha hoose. Kala duwanaanta degmooyinka ama golayaasha magaalada, oo leh heerarkooda kala duwan ee horumarka, cabirka dhulka, shuruudaha awooda, qaab dhismeedka iyo awooda maamulka ayaa ka dhigaysa waxqabadka cadastralka inuu maro heerar kala duwan oo ficil ah. A. Meelaha Cashuurta ...
Boggii hore Page 1 ... Page 7 Page 8 Page 9